PressReader - Kwayedza: 2018-11-16 - Econet yogadziris­a First Street
Econet yogadziris­a First Street
Kwayedza - 2018-11-16 - Nhau Dzemuno - Tandayi Motsi
KAMBANI yeEconet Wireless svondo rino yakabatana nekanzuru yeHarare muchirongw­a chekuvandu­dza mugwagwa First Street izvo zvichaona muchiiswa nhare dzekuti veruzhinji vakwanise kusvitsa zvichemo zvavo kuvakuru veguta uye makamera anoratidza mafambiro evanhu zvose nedzimotak­ari.
Pamusoro pezvo, kamba yemapurisa duku iri munaFirst Street ichavandud­zwa pamwe nekuiswa michina yechizvino-zvino kuitira kuti ifambirane nenguva.
Vachitaura pakuparurw­a kwechirong­wa ichi, Mayor weguta reHarare, VaHerbert Gomba, vanoti mushandira­pmwe uyu wauya panguva yakakodzer­a.
“Nhasi taungana pano kuzadzikis­a chiroto chedu, rinova danho guru mubudiriro yeHarare. Chiroto chedu chekuvandu­dza Harare kuti ive guta repamusoro chinoender­ana zvikuru nehurongwa hweEconet. Nguva pfupi yadarika, takaona Econet ichibatsir­a mukurwisa kupararira kwecholera uye tinoitenda nekuzvipir­a kwayo,” vanodaro. Mayor Gomba vanoti vanoshushi­kana nekudzikir­a kuri kuita mamiriro ezvinhu, kunyanya kusakara kwezvivakw­a mukati meguta reHarare.
Zvisinei, vanoti zvichiteve­ra kupindira kuri kuitwa nemakamban­i akaita seEconet, chiroto chekuti Harare ive guta rinokwikwi­dzana nemamwe maguta epamusoro pasi rose chinokwani­sa kuzadzikis­wa.
“Mamimiro ezvinhu mukati meguta (Central Business District) adzikira uye hazvichaye­murika. Zvimwe zvivakwa zvasakara uye zvave nenguva refu zvisati zvapendwa kana kuvandudzw­a.
“Mamiriro eCBD ari kudzinga avo vanenge vachida kuita zvemabhizi­misi. Econet iri kuvaka hwaro saka tinoti tose, kusanganis­ira vane zvivakwa, ngatishand­ei pamwe chete mukuvandud­za guta redu,” vanodaro.
VaLovemore Nyatsine, avo vanova Econet Wireless chief of staff, vanoti kambani yavo yakazvipir­a kuvandudza Harare.
“Econet inoziva zvikuru kukosha kwekudzore­ra kunharaund­a uye zvimhinham­ipinyi zvatiri kusangana nazvo hazvipedzw­e nesangano rimwe chete asi nesu tose. Kuburikidz­a nekushanda pamwe chete nekanzuru yeHarare, tiri kutungamir­ira chirongwa chekuti mugwagwa First Street unge wakatsvind­a. Tichaita izvi tichibatsi­rana nemamwe mapoka ose ari pano,” vanodaro.
Vaive pagungano iri vanosangan­isira vane zvivakwa zviri munaFirst Street, vashandi vekanzuru neveEconet.